Akademiyada Virtual - Axdiga Waxbarashada Shirarka
Ku soo dhawow Summit Learning Virtual Academy 6 -12
Barashada Summit wuxuu ku dadaalaa abuurida jawiga barashada shaqsiyeed.
At Summit ardayda waxay leeyihiin ikhtiyaarro - waxaan haysannaa in ka badan 200 oo fasal mid kasta oo ka mid ah 3 manhaj oo dhammaystiran.
Waxaan isku darnaa jadwal u gaar ah si aan u waafajino arday kasta.
La kulan la-taliyaha dugsiga si aad u dhisto dariiq waxbarasho oo adag oo qiimo leh.
Iskuulku waa inuusan waligiis noqon “kaliya khadka tooska ah”.
Kaalay booqo bartayada waxbarasho ee shaqsi ahaan.
Waxaan haynaa jadwalka kobcinta xiisaha leh ee Safarada Goobaha, Casharrada PE, Goobaha Daraasaadka, Shaybaarada sayniska, Robotics / Tech, iyo Dhacdooyinka Dugsiga… kaliya iska hubi jadwalka iskuulka waxaadna ogaataa in Axdiga Waxbarshada Summit uu yahay dariiq ka badan intii aad moodeysay in barashada internetka ay noqon karto!
Waxaan sii wadeynaa inaan dhisno iskuul charter ah oo ka jawaabi kara isla markaana la qabsan kara arday kasta. Shir-madaxeedku wuxuu dhisayaa xiriir joogto ah oo taageero ah si arday kasta uu ugu qanco guusha waxbarashada.
Axdiga Barashada Summit wuxuu si khibrad leh uga faa'iideystaa manhajyo kala duwan oo dijitaal ah, barista LIVE, iyo fursadaha kobcinta si firfircoon loogu dhiso xiriir iyo kalsooni arday kasta. Waa hawl qaadata wakhti iyo daryeel iyo ujeedo, waxaanna aaminsanahay in dhammaan ardaydeena ay mudan yihiin!
Dhisida kalsoonida tacliimeed iyada oo loo marayo shaqsiyad ahaanta, wada xiriirka, iskaashiga kooxda, iyo isku xirku waa astaan ​​u ah khibrada ardayda ee Axdiga Waxbarista Summit.
Waa khibradeena annaga oo ah hogaamiyaasha waxbarashada dijitaalka iyo fiirogaarkeena qibradeena ardeyda oo u kala qeybineysa Jaartarka Barashada Sumcada sida dugsiga ugu fiican ee Oregon.
Sababaha Loogu Tilmaamaayo Shirka
Barashada Virtual-ka ma tahay mid adiga kugu habboon?
Wax dheeri ah baro...
Ardayda ayaa leh…
Waxa kaliya ee aan ka qoomameynayaa waa in aanan si dhakhso leh u helin Shir Madaxeed!
"Waxaan dareemayaa sida waxbarashadayda Dugsiga Hore ay ii diyaarinayso mustaqbalka."
“Dugsiga sare ee dhaqanka ma ahan qof walba. Waxaan helay Kulliyadda Hore markii ay caddaatay inaan u baahanahay isbeddel ”
Kulliyaddii hore waxay i siisay fursad aan ugu barto sidaan doonayay. Kani waa suurtogalnimada mid ka mid ah xulashooyinka ugu wanaagsan ee aan waligay sameeyay mustaqbalkayguna weligay umuu muuqan iftin dartiis. ”